के म गर्भवती हुँदा एलर्जी औषधि लिन सक्छु? गर्भवती आमाहरूका लागि गाईड - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि बनाम मित्र समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी चेकआउट कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य कम्पनी, समाचार समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार भारी खेल प्रेस कम्पनी, औषधि जानकारी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> गर्भवती हुँदा तपाईलाई एलर्जी औषधि लिनका लागि गाईड
गर्भवती हुँदा तपाईलाई एलर्जी औषधि लिनका लागि गाईड
रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरुका अनुसार प्रत्येक वर्ष million करोड भन्दा बढी अमेरिकीहरू एलर्जीबाट ग्रस्त छन्। CDC )। वास्तवमा, एलर्जी संयुक्त राज्यमा जीर्ण रोगको छैठौं प्रमुख कारण हो।
अरु के छ त, गर्भावस्थाले कहिलेकाँही एलर्जीको लक्षणहरूलाई नराम्रो बनाउन सक्छ । प्रत्येक महिलाको शरीर फरक हुन्छ, र हरेक गर्भावस्था फरक हुन्छ, त्यसैले एलर्जीले कसरी प्रत्येक गर्भवती महिलालाई असर गर्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान गर्न असम्भव छ।
तर सामान्यतया, गर्भवती महिलाहरूले निम्न लक्षणहरूको केही अन्य एलर्जी पीडितहरू भन्दा भिन्नै अनुभव गर्न सक्दछन्।
गर्भावस्था हार्मोनहरूले तपाईको नाकको भित्री अनुहार सुन्न सक्छ। यसले नाकको भीड र बगिरहेको नाकको कारण गर्दछ।
यो बढाइएको भीडले मौसमी एलर्जी लक्षणहरू खराब बनाउँछ।
गम्भीर भीडले कम तनाव र कम निद्राको गुणस्तर निम्त्याउन सक्छ।
यदि तपाईं यस्तै लक्षणहरूबाट अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ र पीडित हुनुहुन्छ भने, गर्भवती भएको बेलामा तपाईंलाई एलर्जीको औषधि सेवन गर्ने बारे यहाँ जान्नु आवश्यक छ।
गर्भवती भएको बेला केहि एलर्जी औषधि बेवास्ता गर्नुहोस्
त्यहाँ धेरै औषधिहरू छन् जुन गर्भावस्थामा लिन सुरक्षित छैन। ती मध्ये पहिलो मौखिक डिकन्जेन्ट्स हो।
मौखिक डिकोन्जेन्ट्स पहिलो त्रैमासिकको क्रममा धेरै नै बेवास्ता गरिन्छ किनकी धेरै दुर्लभ जन्म दोषहरूको अनिश्चित जोखिमको कारण परिवार स्याहारकर्ता र मालिक सीआरा स्टौंन्टन भन्छिन्। Staunton प्राथमिक हेरचाह सिनसिनाटीमा। यद्यपि Sudafed (स्यूडोफेड्रिन) , जुन फार्मेसी काउन्टरको पछाडि लक छ, उच्च रक्तचाप बिना महिलामा दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तर स्टोन्टनले चेतावनी दिन्छ Sudafed-PE (phenylephrine) , over-the-काउन्टर विकल्प, गर्भावस्थामा कहिले पनि लिनु हुँदैन। यो स्यूडोफेड्रिन भन्दा कम प्रभावकारी छ। तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, गर्भवती महिलाहरूको लागि यसको सुरक्षा शंकास्पद छ।
सुश्री स्टाउन्टनले गर्भावस्थामा कुनै पनि जडीबुटी उपचार प्रयोग नगर्न सल्लाह पनि दिन्छ। संयुक्त राज्य र धेरै अन्य देशहरूमा जडिबुटी औषधीहरू न्यूनतम विनियमित हुन्छन् र प्रतिकूल घटनाहरूको लागि अनुगमित हुँदैन।
गर्भावस्थामा कसरी सुरक्षित रूपमा एलर्जीको उपचार गर्ने
जबकि यो उत्तम हुन सक्छ तपाईलाई सताउने एल्लर्जीनबाट बच्न, यो सधैं सम्भावना नै हुँदैन। धेरै गर्भवती महिलाहरू र तिनीहरूका प्रदायकहरू गैर-फार्मास्युटिकल उपचार योजनाको साथ शुरू गर्न रुचाउँदछन् जब सम्भव हुन्छ। डा। जेनेल लुक, चिकित्सा निर्देशक र सह-संस्थापक न्यूयोर्क शहरमा अर्को जनन उत्पादन , एक सुझाव दिन्छ ओभर-द-काउन्टर सालिन नाक स्प्रे ।
डा। लुक पनि सिफारिस गर्छन् शारीरिक गतिविधि नाक सूजन कम गर्न। यसका साथै उनी भन्छिन् कि भरिपूर्ण नाकका बिरामीहरू सुत्न सक्दछन् यदि उनीहरू निद्रामा ओछ्यानको टाउको 30० देखि 45 45 डिग्री बढाउँछन् भने।
जहाँसम्म, कहिलेकाँही ती गैर-औषधि विकल्पहरूले चाल मात्र गर्दैन, र तपाईंलाई तपाईंको शोकलाई कम गर्नको लागि केही बलियो (उर्फ एलर्जी औषधि) चाहिन्छ। त्यो अवस्थामा त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् जुन प्रयास गर्न सुरक्षित छ।
मध्यमदेखि गम्भीर एलर्जीहरूको लागि, तपाईंको चिकित्सकले सिफारिस गर्न सक्छaननप्रस्क्रिप्शन कोर्टिकोस्टेरोइड स्प्रे वा एक मौखिक एन्टीहिस्टामाइन डा। लुक भन्छन्। केही नाक स्प्रे विकल्पहरूमा राइनकोर्ट एलर्जी, फ्लोनेज, र नासोनेक्स समावेश गर्दछ।
मौखिक एन्टीहिस्टामाइन्सका लागि, स्टउन्टन भन्छिन् कि उनीले क्लेरटिन (लोराटाडाइन) वा जीरटेक (सेर्टिजाइन) सिफारिस गर्छिन् किनभने उनीहरूको राम्रो सुरक्षा ईतिहासको कारण। दुबै दर्जा दिए गर्भावस्था कोटि B एफडीए द्वारा यसको मतलब पशुहरूमा नियन्त्रित अध्ययनहरूले विकास भृूणलाई कुनै प्रतिकूल प्रभाव देखाउँदैन।
को अनुसार, गर्भावस्थामा बेनाड्रिल (डिफेनहाइड्रामिन) एकदम सुरक्षित मानिन्छ CDC । यद्यपि, Benadryl Allergy Plus Congestion गर्भवती महिलाहरूको लागि सुरक्षित छैन किनभने यसमा फेनिलाफ्रिन हुन्छ।
कसरी थाहा छ यदि तपाइँको ल्याक्टोज असहिष्णु
तपाईले मौखिक एन्टिहिस्टामाइन्स मध्ये एक लाई पनि एक नाक स्प्रे संग लिन सक्नुहुन्छ यदि कुनै एक ले आफ्नो लक्षणहरु लाई आफैंमा नियन्त्रण गर्दैन।
Subcutaneous एलर्जेन इम्युनोथेरापी (एससीआईटी) को लागि, उर्फ ​​एलर्जी शट्स — यदि तपाईं गर्भावस्था अघि उनीहरूमा हुनुहुन्थ्यो भने, तपाईंको डाक्टरले तिनीहरूलाई जारी राख्न सक्छ। तर ती गर्भावस्थाको बखत सुरु हुने थिएन किनकि सम्भावित हानीको परिणाम हुन सक्छ यदि प्रतिक्रिया देखा पर्‍यो भने, स्टनटन भन्छन।
यदि तपाईं एलर्जी लक्षणबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, गर्भवती हुँदा तपाईंको प्रदायकसँग एलर्जी औषधिको लागि उत्तम विकल्पहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
कसरी गर्भावस्था को दौरान रगत को थप्नेबाट बच्न
के एक औषधि परीक्षण मा गलत सकारात्मक कारण हुन सक्छ?
तपाइँ ibuprofen संग एक मांसपेशी relaxer लिन सक्नुहुन्छ
कति जनसंख्या अधिक वजन छ
म कसरी मेरो रगत को प्रकार जान्न सक्छु
औंलाहरु र प्राकृतिक उपचार मा कवक संक्रमण
के यो धेरै मेलाटोनिन लिन सम्भव छ?